Sandals Resorts Inokwidziridza Yese-Inosanganisira Portfolio
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Jamaica Nhau » Sandals Resorts Inokwidziridza Yese-Inosanganisira Portfolio
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sandals Resorts International, inotungamira pasi rose kambani inosanganisirwa, yakafumura zviri pamutemo Swim-up Rondoval ™ Suites yepasirese uye yakanyatsofungidzira -makamuri 112 -mberi kwemahombekombe emahombekombe eDutch Village pakupenga kwayo kunoshamisa kweJamaican, Shangu dzekuSouth Coast. Pamusoro peiyi inonakidza nzvimbo yekuzorora, iyo zvose-sanganisira mutungamiri anofara kuzivisa yechipiri nzvimbo yekuvandudza, se Sandals Royal Caribbean yakazivisa zviri pamutemo dzimba dzayo dzakagadziridzwa zvakanaka dzemahombekombe emahombekombe kune ayo Caernarvon neArundel zvivakwa.
Yekutanga-nguva dzose Swim-up Rondoval ™ Suites paSandals South Coast inzvimbo nyowani dzekuJamaica uye dzakavanzika dzimba dzekugara. Imwe neimwe suite inoratidzira zero-kupinda kushambira kumusoro kupinda, padziva yekudonha yega, yekunze Runyararo Kunotakura Tub ™ kune maviri, uye Sandals Resorts 'siginecha nyowani Serenity Swing ine yakajeka maonero. Pasina kutaura, masutu anoshamisira ari mune nyowani nyowani yeSouth Seas Village iri padziva refu-rekushambira kumadokero hemisphere pa17,040 sq. Ft.
Kutenderedza sandals yekuSouth Coast portfolio yekudanana kukwidziridzwa, yakadzikatirwa kudzoka zvakare yakatanga iyo yakagadziridzwa zvizere chiDutch Swim-Up Village, ichiisa nzvimbo yekuzorora kwazvino kufemerwa negungwa. Musha mutsva unozvirumbidza makiromita zana nemakumi mapfumbamwe nemasere, emahombekombe emahombekombe ane kunze Runyararo Kunotesa Tubhu ™ kwemaviri, emahara akasununguka ane yekugezesa yakasarudzika mumapoka akasarudzika uye akananga kushambira-padziva yekuwana emakamuri akasarudzwa, ichipa kutiza kwechokwadi kungomirira kuwanikwa.
Kuenderera mberi nekukwiridzira, Sandals Royal Caribbean yakafumurawo kutsvaira kwekuwedzera, pamwe nekugadziridzwa kwemakamuri makumi matatu nematanhatu munzvimbo dzayo dzeCaernarvon neArundel kuti vashanyi vafare. Inowanikwa munzvimbo yekutandarira yeCaribbean Village uye ichijoinha chivakwa chitsva cheSandringham chakaunzwa kutanga kwegore rino, dzimba dzichangogadziridzwa dzemadziva emadziva dzine fenicha yetsika, Runyararo Soaking Tubs ™ kwemaviri, dzimba dzekugezera nyowani uye zvimwe zvinowedzeredza zvinowedzeredza nekuvandudza dzimba, zvichipa vashanyi zvakanyanya pokugara poumbozha zvinogoneka. Zvimwe zvinowedzerwa paSandals Royal Caribbean, zvinosanganisira budiriro kuSouth Pool nenzvimbo dzakatenderedza, kusanganisira jacuzzi nyowani, macabana matsva ane mafeni ekunze uye mwenje, uye shawa nyowani yekunze.
Iyi nhau inouya pazvitsitsinho zveaya matatu achangounzwa maresitorendi maresitorendi kuSandals Royal Caribbean, kusanganisira:
Zvinonhuwira, izvo zvinounza Pan-Caribbean zvido zvako patafura yechokwadi chiwi chekudyira chiitiko
Bombay Club, iyo inopa chaiyo Indian cuisine - kubva kunonaka madhishi seButter Chicken, kune zvinonaka vegan uye miriwo sarudzo senge Aloo Gobi
La Tavola, iyo inobvumira vashanyi kuti vagovane mukunyaradza, chikafu uye hushamwari hwakawanikwa wakakomberedza tafura yega yeItaly
Izvi zvinowedzera zvinowedzera kune yega yega nzvimbo yekutandarira yatove yekucheka-kumucheto dhizaini dhizaini maficha, kusanganisira epamoyo uye anodakadza akagadzirwa Pamusoro peMvura-Bungalows paSandals South Coast neSandals Royal Caribbean, pamwe neyaitsvaga-pamusoro peMvura-Yakadzikama Yemuchato Chapel, nzvimbo nyowani yeMuchato Bindu uye Latitudes Pamusoro peMvura Bar kuSandals South Coast, ichipa vashanyi sarudzo dzisingaperi dzezororo.
Sandals Resorts inopa vanhu vaviri murudo zvakanyanya kudanana, Luxury Inosanganisirwa® zororo ruzivo muCaribbean. Iine gumi nematanhatu inokatyamadza kumahombekombe egungwa muJamaica, Antigua, Saint Lucia, Iyo Bahamas, Barbados, Grenada, uye ikozvino Curacao, Sandals Resorts inopa yakawanda yemhando inclusions kupfuura chero imwe yekushandira kambani papasi. Siginecha Rudo Nest Butler Suites® yeiyo yekupedzisira mune zvakavanzika uye sevhisi; vatengesi vakadzidziswa neGuild of Professional English Butlers; iyo Red Lane Spa®; 16-Star Global Gourmet ™ yekudyira, kuverengera pamusoro-pasherufu doro, premium waini, uye gourmet hunyanzvi maresitorendi; Aqua Nzvimbo nehunyanzvi PADI® chitupa uye kudzidziswa; inokurumidza Wi-Fi kubva kumahombekombe kuenda kuimba yekurara uye Sandals Yakagadziriswa Michato ese maSandals Resorts anosarudzika Sandals Resorts inovimbisa vaenzi runyararo rwepfungwa kubva pakusvika kusvika pakuenda ne Sandals Platinum Maprotocol eUtsanana, matanho akasimudzirwa nekambani ehutano uye ekuchengetedza akagadzirirwa kupa vashanyi kuvimba kwakanyanya pavanenge vachienda kuzororo kuCaribbean. Sandals Resorts chikamu chemhuri dzine dzimba Sandals Resorts International (SRI), iyo inosanganisira Beaches Resorts uye ndiyo yeCaribbean inotungamira ese-anosanganisira resort kambani. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo Sandals Resorts Luxury Inosanganisirwa® mutsauko, shanya www.mumusi.com.
Vashanyi vanoshanyira Sandals Royal Caribbean ikozvino vanogona kugara mudzimba dzakanyatsofungidzirwa
Bartlett anorumbidza NCB pakuvhurwa kweKushanya Kwemhinduro ...